Pro Golfer Belen Mozo: Ukukhawuleza kunye neNdaba zoNwabo
Ekuqaleni kuka-2000-ukufikelela kwiminyaka ye-2010, umgca wegolfu ovela eSpain uhambele kwibala legalufa labafazi. UBelen Mozo wayese-vanguard yaloo ntshukumo. Ukulandela umsebenzi wokufunda kunye neYunivesithi yaseSouth California, uMozo waphenduka waza wajoyina iLPGA Tour ukususela ngo-2011.
Hlola imifanekiso elandelayo ye-golfer edibeneyo, kwaye kwisicatshulwa siza kuhlola ezinye iimpumelelo zikaMozo ezize zifikelele kumhla - kunye nokutyhila umlingane wakhe weqabane lomdlali kunye nelo xesha wayedlala.
Ixesha leLPGA Rookie likaBelen Mozo
UJonathan Ferrey / Getty Izithombe
UBelen Mozo, ngasentla, ubonakala ngexesha lokuphambuka kwefoto ye-LPGA ngoMatshi ka-2011. Kwaye kwakuyiminyaka ebalulekileyo kuMozo, kuba kwakungumnyaka wakhe wokuqala njengelungu leLPGA Tour. UMozo wabizwa ngokukhawuleza njengomnye wabagolisa abanokhenketho kwiLPGA.
Ekugqibeleni kwakhe ukuba i-rookie yonyaka kwiLPGA Tour yayiyi-tie yesihlanu kwi- Walmart yeNtshona Koloni .
Athit Perawongmetha / Getty Izithombe ze-Mission Hills
Lo mfanekiso ubona uMozo ufaniswa ngeli xesha ngo-China ngo-2010 kwi-Mission Hills Star Trophy, umdlalo odibene kunye neenkwenkwezi ezinkulu kwigalufa kunye neenkwenkwezi ezizonwabisa. UMozo ufumene isimemo sokudlala kuloo naphezu nje kweprogram yokujika.
Kamva ngaloo nyaka wadlala kwi- LPGA School Qualifying School , apho afumana khona ikhadi lakhe leLPGA Tour.
Umsebenzi oMnandi we-Amateur
Nick Laham / Getty Izithombe
UMozo wazalelwa eKaldi, eSpeyin, ngoSeptemba ka-1988. Waqala ukudlala igalofu eneminyaka elibhozo.
Njengomtsalane, uMozo wakhupha umxhwele kabini kwiminyaka eyi-18 ngo-2006 xa ephumelele uMqhubi wama-Amateur yaseBrithani kunye ne- British Ladies Amateur Championship (kwiLadies Am, wamshaya u-Anna Nordqvist ekugqibeleni).
Njengomqeqeshi, uMozo wadlala igalofu kwiYunivesithi yaseSouth California, apho wayenokukhethwa kwexesha lonke le-All-America.
Ukubamba Iso Labaxhasi
UBelen Mozo waqala ukumela i-Greg Norman Collection, uphawu lwegalufa yegalufa, ngo-2011. Ifoto nguTom Rafalovich / Ukunyaniseka kukaGreg Norman Collection
Indlela yaseGelen Mozo yokuthabatha igalofu yabamba isohlo nje lwabalandeli begalufa, kunye neenkampani zokugqoka igalofu kunye nabanye abaxhasi.
Kulo mfa nekiso, ugqoke isambatho kwi-Collection yaseGreg Norman, enye yeyona ndlela ihamba ngayo. Le nkampani nayo ibonisa uMozo kwimikhankaso yayo yokukhangisa.
Kwiminyaka ukususela, uMozo uye waba neentsebenzo zokunika inkxaso kunye ne-Ecco kunye ne-Skechers, iinkampani ezimbini zeentambo, kunye ne-brand ye-sangria ye-brand, phakathi kwamanye amathuba okufumana ngaphandle.
Ngaphezulu, uBelen Mozo ufotshwa kwiphephethi ebomvu njengoko efika kwiqela elikhuselayo kwi-Birdies kwiCape Liberty Cup Cup. I-Birdies kwiSiseko soMhlaza weBasta yindalo ye-LPGA i-golfer Cristie Kerr kwaye iphakamisa imali yovavanyo lomhlaza webele. I-Cup ye-Liberty yaba ngumqhubi wegolfu oye wadlala ukuxhasa inhlangano, kunye negolfu ekhuphisana neLiberty National Golf Club ejongene neWorld Harbor.
Ukubonakala kweqela leMozo
Uhlobo lweBelen Mozo ucezu ukusuka ku-2011 uGreg Norman Collection. Ifoto nguTom Rafalovich / Ukunyaniseka kukaGreg Norman Collection
I-Mozo yenza amaqela amaninzi kazwelonke nakwamanye amazwe kwi-golf course yakhe, zombini njengomyinge kunye nepro.
Ukuqala ngegalufu ye-golf, uMozo wadlala iQembu leYurophu ngo-2003 Junior Solheim Cup kwaye kwakhona kwi-Junior Ryder Cup ka-2004. Njengompro, uMozo wadlala kwiTembu yeSpain kwi-Crown International ye-LPGA Tour 2014.
Ziziphi izinto ezintathu ezibonakalayo kwiqela? UMosi wayeseqela eliphumeleleyo rhoqo.
Unyaka ogqwesileyo kangangoko: 2014
Ixesha elona lifanelekileyo leLPGA Tour Belen Mozo usenayo kwi-career yakhe yokugalufa yayingumkhankaso we-2014. Wagqiba u-55 kwimali yoluhlu, umsebenzi wakhe ongcono kakhulu. Ukugqitywa kwakhe kokugqibela kwakuyi-tie yesine, kodwa leyo yile minyaka i-Mozo Team yaseSpeyin iphumelele umqhudelwano weqela leSizwe samaKhosi.
Mozo kwi-Social Media
UVictor Fraile / Getty Izithombe ze-Mission Hills
UBelen Mozo ugcina uphuhliso lwentlalo olomeleleyo, ukwabelana ngezithombe ezininzi kunye namavidiyo. Ezi ziquka ukuguqula iividiyo, iividiyo zokuzonwabisa (nezithombe ngamnye), nceda zifake iifoto ezimbalwa ze-beach-and-bikini eziphonswe ngokufanelekileyo.
Ungamlandela kwi-Instagram okanye umlandele kwi-Twitter.
Umlingane kaBelen Mozo nguPro Pro Tennis Player uRobert Farah
UBelen Mozo ngumdlali wezemidlalo, kunye neqabane lakhe elide elide lomdlali. Kodwa akayena i-golfer, ungumdlali we-tennis.
UMozo kunye nesithandwa sakhe uRobert Farah sele ehamba iminyaka emininzi, ebuyela emva koko ngo-2010. UFarah wazalelwa eCanada kodwa wakhulela aze adlale eColombia.
UMozo noFarah bahlangana njani? Baya ekholeji ndawonye: UFranh uyiprogram yaseYunivesithi yaseSouth California (USC). Izikhundla eziphezulu zikaFarah ziyiNombolo 163, kodwa uphumelele kakhulu njengomdlali obini. Ubekwe kwindawo ephakamileyo njengeNombolo 21 ehlabathini kwaye unamaqela aphindwe kabini obuphiswano. UFaro uphinde wadlala kwiNdebe ye-Davis yaseColombia.
Ngelo xesha uBelen Mozo waxhoma uNude
Yitsho ntoni? I-golfer eqeqeshekileyo kwiLPGA Tour ibonwe nude? Ewe, kwaye uMozisi akayena kuphela u-LPGA pro owenzele oko ukukhishwa kweMibutho ye- ESPN kuMagazini.
Ukubonakala kukaMozo kwile nguqulelo yonyaka kwimiba yeBhunga ka-2011. Yaye nangona ekhutshwe ngokupheleleyo, akukho nanye yeMozo, ngaba siya kuthi, izibini ezingenanto zibonakaliswe (ingalo edibeneyo apha, ipropati ekhoyo apha). Sekunjalo iifoto zi-racy ngathi ukuba zifake apha, kodwa ukuba ufuna ukuzibona zenza uphando lweWebhu "Umcimbi weBelen Mozo" kwaye uza kubafumana.
I-Golf Golf: I-Glamor Shots Photo Galleries
I-Admissions yeYunivesithi yaseTeber State
Ubomi beeHack for Students College
I-Henderson State University Admissions
UAlbrecht Dürer - Ukungena kwi-Selfie
Iirekhodi zokuBala kwiBritish Open
Uthotho luqala kwiKhaya - iMfazwe Yehlabathi II Iposta